कांग्रेसभित्र भागवण्डाको राजनीतिले नेविसंघ अपूर्णः सहमहामन्त्री डा. महत - Sankalpa Khabar
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाली कांग्रेसभित्र भागवण्डाको राजनीतिले नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले पूर्णता नपाएको बताए । नेविसंघको ५२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा बाल्मीकि क्याम्पसमा आयोजित कार्यक्रममा सहमहामन्त्री डा. महतले भने, ‘ठूलो संख्यामा भूमिका नपाएका क्षमतावान विद्यार्थीलाई समेटेर नेविसंघलाई छिट्टै पूर्णता दिइनेछ ।’
नेविसंघले पूर्णता पाएसँगै विधानअनुसार अधिवेशनको तयारी थाल्नुपर्छ भन्दै सहमहामन्त्री डा. महतले भने, ‘नेविसंघलाई नियन्त्रण होइन, विस्तार गर्नुपर्छ । सदस्यता अभियान चलाउनुस्, विद्यार्थीलाई नेपाली कांग्रेससँग जोड्नुस् ।’
कोभिडको यो महामारीमा सरकार उदासिन भएर मुकदर्शक बनेको आरोप सहमहामन्त्री डा. महतले लगाए । सरकारको यो उदासिनताले समस्या बिकराल बन्नेतर्फ औंल्याउँदै डा. महतले भने, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन समुदायलाई नेविसंघले जागरुक बनाउनुपर्छ ।
सहमहामन्त्री डा. महतले कम्युनिष्टहरुले व्यवस्थामाथि खतरा पैदा गरेकाले सजक रहन नेविसंघलाई आग्रह गरे । भाषणमा लोकतन्त्रको कुरा गर्ने कम्युनिष्टहरुले व्यवहारमा अधिनायकवादी चरित्र देखाएको आरोप डा. महतको थियो । यसतर्फ चनाखो बन्ने उनले आग्रह गरे ।